Dowladda oo sheegtay in isbitaalada Muqdisho buuxdhaafsheen da... | Universal Somali TV
"Walaalayaalow waxaan idin leenahay taxadarka aad buu u badan yahay. Isbitaaladii loo asteeyay sida Martini iyo Sumait ee Jaamacadda Simad, runtii tirada aad iyo aad bay u sii kordheysaa." Ayay tiri Wasiiradda.
"Magaalada Oxygen-keeda aad ayuu u yar yahay shirkadaha sameeya, baahida aad bay u badatay." Ayay tiri Foosiya Abiikar oo Warbaahinta la hadashay.
"Waxaa jira dad badan oo calaamadaha COVID-19 u dhintay ama la xanuunsanaya, oo aanan isbitaal soo doonan. Gobolka Banaadir aan joogno cudurka wuxuu u fidayaa si aan caadi ahayn." Ayay sii raacisay Wasiiraddu.
Hadalka Wasiir Foosiya ayaa imaanaya maalin ka dib, markii Adam Abdul-mowla, Isku Duwaha Arrimaha Bani'aadanimada Qaramada Midoobey ee Xafiiska Magaalada Muqdisho (UNSOM) uu sheegay in xaaladaha COVID-19 ee dalka ay sare u kacday boqolkiiba labaatan (20%).
Kan-xigaAbaar baahsan oo ka jirta Degmada Cee...
Kan-horeQin Jian "Somaliya waa dal leh dhul b...
60,005,586 unique visits